चर्चित होईन लोकप्रिय कलाकार बन्छु : एन्जिला रेग्मी | Jukson
रुपन्देही कै प्रतिभा जो ३ दर्जन बढि गित स‍गितमा अाफ्नाे स्वर दिइसकेकि छन् । अाजभाेलि अत्यन्तै बेयस्त बन्न थालेकि छन् । उनै स‌ग jukson.com ले तयार पारेकाे याे कुराकानि
सङ्गीतीतिक जिवन के छ ?
आफु सानै देखि सङगीतमा लाग्नाले यसैमा म रमाउछु । मेरो साङगीतिक जिवन एकदम राम्रो तथा रमाईलो छ । सबैले माया गपरदिनु भएको छ मेरो गितहरु मन पराईदिनु भएको छ । त्यसैले नै अलि रमाईलो छ । जे होस व्यस्त नै छु ।
गीत कति गाउनु भयो ?
१० वर्षको उमेरमा यो जिवन हो बोलको गीतबाट गाएन क्षेत्रमा प्रवेस गरेँ । मैले २०६४ सालको बुटवल आईडल पछि गीत गाउन सुरु गरेकि हुँ । हाल सम्म ३ दर्जन बढि गितमा स्वर दिएकी छु ।
कस्तो कस्तो गीत गाउने ?
सानै देखि गित गाएँ । सानो मा वाल गित पनि गाएँ । अहिले सेन्टीमेन्टल गित, रोमान्टीक गितहरु पनि गाएकि छु । डान्सीङग नम्बर , पप गित पनि गाएँ । फुटकर एल्बमहरु, फिल्मका गितहरु पनि गाएँ । जे होस सबै प्रकारका गितहरु गाएकि छु ।
परिवारको सहयोग कस्तो ?
परिवारको सहयोग नभएको भए त शायद म आज यो स्थान मा हुने थिईन होला , तपाईहरुले पनि एन्जीला रेग्मी भनेर चिन्नुहुने थिएन होला । मलाई साङगीतीक क्षेत्रमा परिवारको एकदम सहयोग छ ।
मलाई सबै भन्दा मनपर्ने खाना बर्गर र ससेज हो । यो एकदमै मन पर्छ ।
पोसाक कस्तो मन पर्छ ?
ड्रेस त समय ,परिस्थीती अनुसार अनि माहोल अनुसार गर्ने गर्छु । तर सामान्यतया मलाई जिन्स टिर्सट अनि पाईन्ट मन पर्छ ।
फिटनेस कसरी मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो मेन्टेन्स गरेकि छैन् । खासै केहि गर्दिन् । पानी, जुस फलफुल हरु बढि खान्छु ।
कति अध्ययन गर्नु भयो ?
अहिले बि बि एस प्रथम वर्ष अध्ययन गर्दै छु । जे होस राम्रै छ । जि एस कलेज मा अध्यनरत छु ।
घुमफिर गर्न मन पर्छ ?
घुमफिपर गर्न त एकदम मन पर्छ । नयाँ स्थान घुम्न , नयाँ कुरा सिक्न बुझ्न खुब मन लाग्छ ।
खेलकुद मा के मन पर्छ ?
खेलकुद त खेलेको छैन् । तर स्कुल मा पढ्दा चाहि बास्केटबल र ब्याडमिन्टन खेल्न मन पर्छ ।
मोबाइल कस्तो छ ?
मोबाईल सामसुङ नोट २ छ । खासै मोबाईल फेर्दिन ।
चलचित्र हेर्न मन पर्छ ?
आफु साङगीतिक क्षेत्रमा रहेको मान्छे हुनाले म धेरै नै हेर्छु नेपालि चलचित्र । कस्ता गित आए म त्यो पनि हेर्छु ।
मापसे गर्नुहुन्छ ?
नाई गर्दिन र गर्ने पनि छैन् ।
अनि बिवाह कहिले गर्ने ?
(हा‌स्दै ) बिवाहको बारेमा मैले अझै केहि सोचेकै छैन् । घरकि जेठि छोरि हुँ । पहिला आफ्नो करियर बनाउछुँ । त्यस पछि बल्ल सोचौला ।
प्रेम त गर्नु भएको छ होला नि ?
म गित संगीतलाई धेरै मायाँ गर्छु । प्रेम पनि गित संगीतलाइ गर्छु अरु कसैलाई गरेको छैन ।
भावि जिवनका सपना के के छन् ?
मेरो सपना भनेको एउटा सफल अनि सफल कलाकार बन्ने हो । म चर्चित होईन लोकप्रिय कलाकार बनेर नेपाली गित संङगीत क्षेत्रलाई योगदान दिन चाहान्छु ।
आज सम्म सम्पुर्ण दर्शक स्रोताहरुले मायाँ गरीरहनु भएको छ । आगामी दिनमा पनि यो साथ अनि सहयोग यसै गरी पाईराखौँ । तपाइहरुको साथ र सहयोग बिना नेपाली गित संगीत अधुरो छ त्यसैले सबै मिलेर यसलाई मायाँ गर्नुपर्छ भन्न् चाहान्छु । अनि यो jukson.com लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
मेलोडियस सेन्टिमेन्टलमा 'क्युट श्रेया' : 'जाँदैछु' बोलको गितमा यस्तो देखिइन् (भिडियो रिलिज)